Izakhono kunye neempawu zoBuntu ezifunwa ngabaqeshi
Ukufunda indlela yokuchonga izakhono zakho zasemsebenzini kunye neempawu zakho kunye nokubhala ngokunyanisekileyo kwaye uthethe ngazo nabaqeshi-ekuqhubekeni, ekubhaleni iileta, kwaye ngexesha lodliwanondlebe- kuya kuguqula uphando lwakho lomsebenzi.
iziphumo ebezingalindelekanga zokugonya i-meningitis b
Nokuba yeyiphi na indawo ohlala kuyo emsebenzini -ingcali okanye ikhola eluhlaza, umsebenzi wobugcisa okanye umphathi-wezakhono onokuthi uzisebenzise, ​​kunye nezakhono abaqeshi abazimisele ukukuhlawula ukuba uzisebenzise, ​​uguqulela kumgaqo-nkqubo weinshurensi yengqesho omangalisayo, isambrela esikhulu ukukugcina ungadanga xa kududuma uqoqosho kwimvula yakho.
Elinye lamagama uhlala ufumana kwingxoxo yemfuno zomsebenzi yile iseti yobuchule. Iseti yezakhono ibhekisa kwizakhono ezifunekayo ukufezekisa umsebenzi othile okanye ukwenza umsebenzi owunikiweyo.
Izakhono ezidumileyo ezifunwa ngabaqeshi
Ukujikeleza kophando oluninzi kucebisa ngezakhono abaqeshi abadla ngokuzithanda. Olu luhlu lulandelayo lumele kodwa alunabubanzi:
Unxibelelwano olusebenzayo: Abaqeshi bafuna abaviwa abanokuphulaphula imiyalelo kwaye basebenze kule miyalelo ngesikhokelo esincinci. Bafuna abasebenzi abathethayo, babhale, kwaye bamamele ngokufanelekileyo, balungelelanise iingcinga zabo ngokufanelekileyo, kwaye bachaze yonke into ngokucacileyo.
isetyenziselwa ntoni i-sildenafil
Ulwazi lwekhompyuter kunye nobugcisa: Phantse yonke imisebenzi ngoku ifuna ukuqonda, ukusukela kwesiseko ukuya phambili, isoftware yekhompyuter, ukuqhubekeka kwamagama, i-imeyile, izipredishithi kunye nokuhamba nge-Intanethi.
Ukusombulula ingxaki / Ukuyila: Abaqeshi bahlala befuna abantu abanokubakhupha kwilitye. Isakhono sokusombulula iingxaki sinokukunceda ngokwenza imicimbi, ukuqhubekeka idatha, ukwenza umbono, kunye nokufikelela kwisisombululo. Abaqeshi bafuna isiqinisekiso sokuba ungoyisa imiceli mngeni yemisebenzi ngokucinga ngokunzulu nangoyilo.
Unxibelelwano nabanye: Ukwakha ubudlelwane kunye nolawulo lobudlelwane zizinto eziphambili ngokubaluleka kubaqeshi abaninzi. Ezi zakhono ziqinisekisa ukuba umgqatswa unokunxibelelana kakuhle nabanye, bobabini abasebenza kunye nabathengi.
Izakhono zokusebenzisana: Isakhono sokusebenza kakuhle nabanye ngelixa ulandela usukelo olufanayo yeyona nto ibalekayo yabaqeshi. Kodwa kunjalo nokukwazi ukusebenza kunye nokujonga okuncinci.
Ukwahluka kobuntununtunu: Kwilizwe lanamhlanje, ubuntununtunu benkcubeko kunye nokukwazi ukwakha ubudlelwane nabanye kwimeko yeenkcubeko ezininzi kuxabiseke kakhulu ngabaqeshi.
Ukucwangcisa nokulungiselela: Ubomi basemsebenzini budinga ukubeka phambili kunye nokulungiselela ulwazi. Abaqeshi baxabisa abantu abathi, ngokomfuziselo, bemba iqula ngaphambi kokuba banxanwe.
Ngaba i-clindamycin ipenicillin
Ubunkokeli kunye nolawulo: Ubunkokeli buquka ukuzithemba okuzithemba, kunye nolwazi olubanzi lweenjongo zenkampani. Ezi ziimpawu ezikhuthazayo nezikhuthazayo, zibonelela ngesiseko esiqinileyo sokusebenzisana.
Abaqeshi bayaqhubeka nokukhangela iziqinisekiso onokuthi ngandlela thile ubenzele imali okanye ubongele imali. Izakhono eziluncedo ekongeni imali zifunwa kwilizwe liphela, kubandakanya nemibutho engenzi nzuzo.
flonase kunye ne-claritin kunye
Iimpawu zobuqu ezifunwa ngabaqeshi
Nazi ezinye zeempawu zobuqu abaqeshi abaxabisa kakhulu:
Ukuziqhelanisa nokulungelelanisa: Phantse isiqingatha sabaqeshi kuvavanyo lwamva nje banike inqanaba eliphezulu ekuvulekeni kwimibono kunye neengcinga ezintsha. Bayabathanda abagqatswa abanokusebenza ngokuzimeleyo okanye njengenxalenye yeqela, batshintshe iigesi xa kufuneka njalo, nokuba kukwenza imisebenzi emininzi okanye ukuhlengahlengisa iiyure zomsebenzi kunye nendawo.
Ubungcali kunye nokuziphatha: Abaqeshi bafuna abasebenzi abanemveliso abanokuziphatha okuhle abanamathela kwimiceli mngeni bade bahlangane nayo.
Isimo sengqondo esifanelekileyo namandla: Abokugqibela ukukhetha kunye nokunyusa abagqatswa ababonisa imeko yokudakumba kunye nokungakhuli ngokweemvakalelo. Bonisa umbono welanga kunye namandla, nokuziphatha okulungelelanisiweyo.
Yintoni iakhawunti yeGoogle kunye neakhawunti
nemagniziyam gluconate 500 mg
indlela yokubulala iintwala zomzimba
imibhobho enengxolo xa uqhuba amanzi
iziphumo ebezingalindelekanga ze-avodart